Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > မဇ္ဈိမတီဗီ
မြန်မာအမျိုးသမီးများ အိန္ဒိယ လေ့လာရေးခရီး
Women Delegation to India (12-18.5.2013)
Date: ၂၀ မေ ၂၀၁၃ - Added by: မဇ္ဈိမသတင်းဌာန
Views: 150 - Votes: 1 - Rating:5မြန်မာ့အရေး Bertil Lintner ဟောပြောချက်
Bertil Lintner on recent changes in Myanmar and geopolitics
Date: ၂၀ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၁၃ - Added by: မဇ္ဈိမသတင်းဌာန
Views: 1864 - Votes:5- Rating: 3.2 ကချင်စစ်ပွဲအရေး ဒေလီရှိ မြန်မာများ ဆန္ဒပြ
Delhi Burmese Demonstration on Kachin war 19.1.2013
Date: ၂၀ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၃ - Added by: မဇ္ဈိမသတင်းဌာန
Views: 1929 - Votes: 1 - Rating:5စီးပွားရေး တီဗွီသတင်း (၂)
Mizzima TV Weekly, Business News No .2(Sat 12 January, 2013)
Date: ၁၅ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၃ - Added by: မဇ္ဈိမသတင်းဌာန
Views: 878 - Votes:4- Rating: 3.25 စီးပွားရေး တီဗွီသတင်း (၁)
Mizzima TV Weekly, Business News No . 1 (Sat 05 January, 2013)
Date: ၁၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၃ - Added by: မဇ္ဈိမသတင်းဌာန
Views: 680 - Votes:4- Rating: 2.75 သီလ၀ါအထူးစီးပွားရေးဇုံကို အများပိုင် ကုမ္ပဏီများဖြင့် တည်ဆောက်မည်
Thilawah, the Special Economic Zone will be concentrated by public sectors
Date: ၁၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၃ - Added by: မဇ္ဈိမသတင်းဌာန
Views: 1635 - Votes:2- Rating: 3.5 ABSDF ၏ ပြည်တွင်းလာရောက်မှု သတင်းစာ ရှင်းလင်း
ABSDF holds press conference on its visit
Date: ၀၃ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၃ - Added by: မဇ္ဈိမသတင်းဌာန
Views: 1952 - Votes:0- Rating:0ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ရန်ကုန်တွင် ဆုတောင်းပွဲပြုလုပ်
Rally in Yangon for Peace in Kachin State
Date: ၀၂ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၃ - Added by: မဇ္ဈိမသတင်းဌာန
Views: 1157 - Votes:5- Rating:4ABSDF မှ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအား တွေ့
ABSDF meets with 88 student political forces
Date: ၂၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ - Added by: မဇ္ဈိမသတင်းဌာန
Views: 1195 - Votes:7- Rating: 2.43 အိန္ဒိယ-အာဆီယံ ဆွေးနွေးပွဲမှ မြန်မာ့ကဏ္ဍ
Interest of Burma in India-ASEAN summit
Views: 485 - Votes: 1 - Rating:5[ 1 ] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [ 8 ] - [9] - [ 10 ] - [ 11 ] - [ 12 ] - [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] - [ 16 ] - [ 17 ] - [ 18 ] - [ 19 ] - [ 20 ] - [ 21 ] - [ 22 ] - [ 23 ] - [ 24 ] - [ 25 ] - [ 26 ] - [ 27 ] - [ 28 ] - [ 29 ] - [ 30 ] - [ 31 ] - [ 32 ] - [ 33 ] - [ 34 ] - [ 35 ] - [ 36 ] - [ 37 ] - [ 38 ] - [ 39 ] - [ 40 ] - [ 41 ] - [ 42 ] - [ 43 ] - [ 44 ] - [ 45 ] - [ 46 ] - [ 47 ] - [ 48 ] - [ 49 ] - [ 50 ] - [ 51 ] - [ 52 ] - [ 53 ] - [ 54 ] - [ 55 ] - [ 56 ] - [ 57 ] - [ 58 ] - [ 59 ] - [ 60 ]	﻿
မြန်မာအမျိုးသမီးများ အိန္ဒိယ လေ့လာရေးခရီးမြန်မာ့အရေး Bertil Lintner ဟောပြောချက်ကချင်စစ်ပွဲအရေး ဒေလီရှိ မြန်မာများ ဆန္ဒပြစီးပွားရေး တီဗွီသတင်း (၂)စီးပွားရေး တီဗွီသတင်း (၁)သီလ၀ါအထူးစီးပွားရေးဇုံကို အများပိုင် ကုမ္ပဏီများဖြင့် တည်ဆောက်မည်ABSDF ၏ ပြည်တွင်းလာရောက်မှု သတင်းစာ ရှင်းလင်းကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ရန်ကုန်တွင် ဆုတောင်းပွဲပြုလုပ်ABSDF မှ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအား တွေ့အိန္ဒိယ-အာဆီယံ ဆွေးနွေးပွဲမှ မြန်မာ့ကဏ္ဍဦးသိန်းစိန် အိန္ဒိယခရီးစဉ်အား မြန်မာများ ဆန္ဒပြကားလမ်းညံ့၍ မြဝတီ ကုန်စည်သယ်ရန် ခက်ခဲရန်ကုန်ရောက် ဒဏ်ရာရ သံဃာများထံ ၈၈ သွားရောက်လူကုန်ကူးမှု တားဆီးရေး MTV EXIT Live Showလက်ပံတောင်း အကြမ်းဖက်မှု DKBD ရှုတ်ချဒေါ်စု နိုဗယ်ဆုရရှိခြင်း ၂၁ နှစ်ပြည့်လက်ပံတောင်းအရေး လူ့အခွင့်အရေးနေ့ ဆန္ဒပြပွဲခပ်တန်းတန်း အိမ်နီးချင်း မြန်မာပြည် ဆွေးနွေးပွဲကြေးနီစီမံကိန်း ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်း စုံစမ်းရေး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလက်ပံတောင်း အရေး ရန်ကုန် ဆန္ဒပြသူများအား ရဲဖမ်းဆီး	User Login